9th Annual Burmese Literary Talk and MoeMaKa Retreat 2008: 2008
9th Annual Burmese Literary Talk (8th Nov 2008) Part 4
Director U Win Pe
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 11:09 PM No comments:
9th Annual Burmese Literary Talk (8th Nov 2008) Part 3
POET - AUNG WAY
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 1:49 PM No comments:
9th Annual Burmese Literary Talk (8th Nov 2008) Part 2
Mar Mar Aye & Nyan Oo Maung
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 10:01 AM No comments:
ူမန်မာမိသားစု စာပေဟောေူပာပြဲ ဆန်ဖရန်စင်္စကိုမြာ ကဵင်းပ
(RFA - Burmese Program) 2008-11-10
အမေရိကန်ူပည်ထောင်စု အနောက်ဘက်ူခမ်း ဆန်ဖရန်စင်္စက္ဘိုမြိႚတဝိုက်မြာ နေထိုင်တဲူ့မန်မာမိသားစုတြေ စုပေၝင်း ဋ္ဌကီးမြး္ဘပီး ၉ဋ္ဌကိမ်ေူမာက် စာပေဟောေူပာပြဲကိုိုံဝင်ဘာ ၈ရက် စနေနေႛက ကဵင်းပပၝတယ်။
အမေရိကန်ူပည်ထောင်စု ဆန်ဖရန်စင်္စကို ဘေးဧရိယာူမန်မာမိသားစုမဵာိးိုံဝင်ဘာ ၈ရက်နေႛက ကဵင်းပသော ၉ဋ္ဌကိမ်ေူမာက် စာပေဟောေူပာပြဲတငြ် ပန်းခဵီဆရာ၊ စာရေးဆရာ၊ ႟ုပ်ရင်ြဒၝ႟ိုက်တာ ဦးဝင်းဖေ ဟောေူပာနေပုံဖစ်ပၝသည်။ ထိုင်နေသူမြာ ကဗဵာဆရိာံငြ့် စာပေဝေဖန်ရေးဆရာ မောင်စမြ်းရည်ူဖစ်သည်။ (Photo: RFA)
မနေႛကိုံဝင်ဘာ ၉ရက် တနဂဿေိံနြေႛမြာတော့ မိုးမခ အင်တာနက် စာမဵက်ြိာံ စတင်ခဲ့တဲ့ ငၝိးံစြ်ူပည့် အထိမ်းအမတ်ြပြဲ ကဵင်းပပၝတယ်။
ဆန်ဖရန်စင်္စက္ဘိုမြိႚနားကူမန်မာတြေ အမဵားစုနေထိုင်တဲ့ ဖရီးမောင့်္ဘမြိႚမြာ ဒီပြဲိံစ်ြပြဲစလုံး ကဵင်းပတာပၝ။ စာပေ ဝေဖန်ရေးဆရာ မောင်စမြ်းရည်။ စာရေးဆရာ၊ ပန်းခဵီဆရာ၊ ႟ုပ်ရင်ြဒၝ႟ိုက်တာ ဦးဝင်းဖေ၊ စာရေးဆရာ ဉာဏ်ဦးမောင်ခေၞ အရင်ြဉာဏိက၊ ကဗဵာဆရာ အောင်ဝေးနဲႛ ဒေၞမာမာအေးတိုႛက စာပေရေးရာတြေ ဟောေူပာုကပၝတယ်။ ဒီပြဲကို စာပေဝၝသနာရငြ်ိံစ်ြရာလောက် တက်ရောက်ုကတယ်လိုႛ ဟောေူပာပြဲ ကဵင်းပရေး အဖြဲႚဝင်လည်ူးဖစ် မိုးမခအင်တာနက် စာမဵက်ြိာံတာဝန်ခံလည်ူးဖစ်တဲ့ ဦးမောင်မောင်ဝင်းခေၞ မောင်ရစ်ကေူပာပၝတယ်။
မောင်ရစ်။ ။ “ထူးခားတာက စာပေဝၝသနာရငြ် လူငယ်တေကြ စာရေးဆရာဋ္ဌကီးတေရြဲ့ အထုပဍ္ဎတ္ဇိတြေ၊ သူတိုႛရဲ့ စာပေလက်ရာတေကြို ကောက်ိုံတ်္ဘပီးတော့ နံရံကပ်စာစောင်လေးမြာ ဖော်ူပတယ်။ စာပေဟောေူပာပြဲကို လာတဲ့ စာရေးဆရာဋ္ဌကီးတေရြဲ့ အထုပဍ္ဎတ္ဇိတေအြူပင် သူတိုႛရဲ့ စာလေးတေပြၝ ကောက်ိုံတ်ဖော်ူပတာူဖစ်တဲ့အတကြ်ေုကာင့် စည်စည်ကားကာူးဖစ်တယ်။ နောက်္ဘပီးတော့ ကယ်ြလန်ြသြားတဲ့ ဆရာမဋ္ဌကီး ဒေၞအမာ၊ေုကးမုံ ဦးသောင်း၊ ဆရာဦးတင်မိုး၊ သူတိုႛနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီးတော့လည်း အမတ်ြတရ စာစောင်လေးတေမြာ ဖော်ူပတယ်။ အကဵဉ်းကန္ဘေပီးတောူ့ပန်္ဘပီး လတြ်ေူမာက်လာတဲ့ ဆရာဦးဝင်းတင်နဲႛ ပတ်သက်္ဘပီးတော့လည်း ဒီလူငယ်လေးတေကြ ဂုဏ်ူပတြဲ့အနေနဲႛ သူတိုႛ နံရံကပ် စာစောင်လေးမြာ ဖော်ူပတယ်။ ဆရာဋ္ဌကီးရဲ့ ကဗဵာတေပြၝ တင်ဆက်ထားတယ် ဆိုတာမဵြိး တြေႚရတယ်။ ဆိုတော့ မဵြိးဆက်သစ်၊ မဵြိးဆက်ဟောင်း လူငယ်တေအြားလုံးကန္ဘေပီးတော့ ဝိုင်း္ဘပီးတော့ စာပေဟောေူပာပြဲ တခုမြာ ဆုံစည်း္ဘပီးတော့ တယောက်နဲႛတယောက် စကားတြေေူပာုကတယ်၊ အူမင်တြေ ဖလယြ်ုကတယ်။ စာပေလက်ရာတေကြိုလည်း တခုတ်တရူပန်္ဘပီး ဖော်ူပုကတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပေၝ့။”
မိုးမခ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံ ငၝိးံစြ်ေူမာက် မိတ်ဆုံစားပြဲနဲႛ စာပေစကားဝိုင်းကိုတော့ ဖရီးမောင့်္ဘမြိႚမြာရြိတဲ့ မေတ္ဇာနိံ္ဋဝိဟာရ ကေဵာင်းတိုက်မြာ ကဵင်းပပၝတယ်။
မိုးမခအင်တာနက် စာမဵက်ြိာံကို ဖန်တီုးကတဲ့ စေတနာရင်ြလုပ်အားပေးတေနြဲႛ စေတနာ့ဝန်ထမ်း စာပေရေးသားခဵီူးမၟင့်တဲ့ စာရေးဆရာဋ္ဌကီးတြေ လူငယ် စာပေဝၝသနာရင်ြတေရြဲ့ တြေႚဆုံပြဲကို ၂၀၀၆မြာ ပထမဆုံး ကဵင်းပခဲ့ပၝတယ်။ အင်တာနက်မြာပဲ ဝိုင်းဝန်းလုပ်ကိုင်နေုက္ဘပီး သုံိးံစြ်ူပည့်အထိမ်းအမတြ် မိတ်ဆုံပဲကြဵင်းပမြ တယောက်နဲႛ တယောက်ူမင်တြေႚုကတယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။ ၂၀၀၇ခိုံစ်ြမြာေ႟ဝြၝရောင် လပ်ြရြားမြူဖစ်ပြားခဲ့လိုႛ မိတ်ဆုံပြဲ မကဵင်းပူဖစ်ပဲ ဒီိံစ်ြကဵမြ စာပေဟောေူပာပြဲနဲႛ တိုက်ဆိုင်္ဘပီး မိုးမခ အင်တာနက်စာနယ်ဇင်း အတိုင်ပင်ခံ စာပေပညာရင်ြနဲႛ တြေႚဆုံဆြေးြေိံး ဂၝရဝူပပြဲ ကဵင်းပတာပၝ။
မောင်ရစ်။ ။ “ကိုအောင်ဝေးကန္ဘေပီးတော့ ကန်တော့တာ တိုင်ပေးတယ်။ ဆရာဋ္ဌကီးတေကြို မိုးမခ ဝိုင်းတော်သားတြေ၊ မိုးမခ စာပေခဵစ်သူတေအြားလုံးက ဝိုင်း္ဘပီး ကန်တောု့ကတယ်။ ဆရာဋ္ဌကီးတေကြလည်း ဆုမန်ြကောင်းတြေ ပေုးကတယ်။ လတ်ြလပ်တဲူ့မန်မာူပည်ဋ္ဌကီးဆီ အားလုံး အူမန်ဆုံူးပန်ရောက်ိုံင်အောင် အားထုတ်ိုံင်တဲ့လူတြေူဖစ်ုကပၝစေဆ္ဘိုပီးတော့ ဆုပေးတယ်။ ဆုဆိုတာက ပေးတိုင်းတော့ မူပည့်ဘူးပေၝ့ဗဵာ။ ဒၝပေမဲ့ ဆရာဋ္ဌကီးတြေ တိုက်တနြ်းတာကတော့ အားထုတ်ိုံင်တဲ့လူတြေူဖစ်ပၝစေ ဆ္ဘိုပီးတော့ ဆုပေးတာပေၝ့နော်။ူပန်ိုံင်ုကပၝစေလိုႛ ဆုပေးတာတော့ မဟုတ်ဖူးပေၝ့နော်၊ အားလုံး ဝိုင်းအားထုတ်္ဘပီးတောူ့ပန်အောင်လုပ်မြူပန်ိုံင်ုကမြာကိုး။”
မိုးမခအင်တာနက်စာနယ်ဇင်း တာဝန်ခံ ကိုမောင်ရစ်ကေူပာသြားတာပၝ။
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 11:38 PM No comments:
From 2008 - 9th Annual Burmese Literary Talk
ဘေးဧရိယာ မြန်မာများ စာပေဟောပြောပွဲ ကျင်းပ
နိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၈
နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၀၈ စနေနေ့က ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးဧရိယာ မြန်မာစာပေချစ်သူများ ၀ိုင်းဝန်းစီစဉ်ကြသည့် ၉ ကြိမ်မြောက် စာပေဟောပြောပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့သည်။ ဧည့်သည် အနုပညာရှင်ကြီးများဖြစ်သည့် ဒါရိုက်တာဝင်းဖေ၊ မောင်စွမ်းရည်၊ တေးသံရှင်မာမာအေး၊ ကဗျာဆရာ အောင်ဝေးတို့နှင့်အတူ နယ်ခံစာရေးဆရာ ဉာဏ်ဦးမောင်တို့က ကြွရောက်လာသူ ပရိသတ် ၁၀၀ ကျော်ကို ဟောပြောခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဓာတ်ပုံများကို တင်ဆက်လိုက်သည်။ (ဓာတ်ပုံ - မိုးမခ၊ ငယ်ဦးမွန်)
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 11:15 PM No comments:
၁၉၆၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ တွင် ဦးအုံးမောင်၊ ဒေါ်နှင်းရည်တို့မှ ဖလံဂုဏ်ရွာ၊ ရေဦးမြို့နယ်တွင် မွေးဖွား
ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော်ဦးကေသရ၊ ဦးသုမနတို့ထံက အခြေခံ သင်ပုန်းကြီး၊ ဘာသာရေးနှင့် စာပေများ သင်ယူခဲ့
၁၃ နှစ်တွက် ရှင်သာမဏေအဖြစ် ခံယူ
ရေဦးမြို့ ချမ်းသာကြီးတိုက်၊ မန္တလေးမြို့ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်တို့တွင် ပရိယတ္တိကျမ်းစာများ သင်ယူ
ရန်ကုန် မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာနှင့် ပဏ္ဏိတာရာမ ရွှေတောင်ကုန်း သာသနာ့ရိပ်သာတို့တွင် ၀ိပဿနာတရားတော်များ ပွားများခဲ့
၁၉၉၆ ၀န်းကျင် အတွေးအမြင် စာစဉ်ပါ “စေတနာမမှန်သော စေတနာစကား” ဆောင်းပါးဖြင့် စာပေနယ်သို့ ၀င်ရောက်ခဲ့
အတွေးအမြင်၊ ရွှေအောင်လံ၊ ရနံ့သစ်၊ ကလျာ၊ အပ္ပမာဒ၊ ဓမ္မရတနာ၊ ရတနာမွန်၊ သာထွန်းပြန့် စာစောင်များတွင် အခါအားလျော်စွာ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး နှင့် အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးများ ရေးသားခဲ့
၂၀၀၂ တွင် “ကမ္ဘာကြီး ငြိမ်းချမ်းပါစေ” အမည်ဖြင့် ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ် စာအုပ်ထုတ်ဝေ
၂၀၀၇ တွင် “မကြီးရင့်သေးပေမယ့် အသီးအပွင့်လေးတွေနဲ့ ဝေဆာနေခဲ့သူ” ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ် စာအုပ် ထုတ်ဝေ
ပြည်တွင်း ပြည်ပထုတ် စာစောင်များ၊ အင်တာနက်စာမျက်နှာတို့တွင် အခါအားလျော်စွာ စာရေးသားလျက်ရှိ
ကယ်လီဖိုးနီးယား ဆန်ဟိုဇေးစတိတ် ယူနီဗာစီတီ တွင် စိတ်ပညာအထူးပြုဘာသာရပ်ဘွဲ့ တက်ရောက်လျက်ရှိ
၁၉၉၉ မှ ယနေ့တိုင် အမေရိကန်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဖရီးမောင့်မြို့၊ မေတ္တာနန္ဒ၀ိဟာရ ဓမ္မရိပ်သာတွင် သီတင်းသုံး တရားဟော၊ တရားပြလျက်ရှိ
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 10:51 PM No comments:
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 2:46 PM No comments:
9th Annual Burmese Literary - Inviting Sponsor & Contributors from Burmese community
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 11:52 AM No comments:
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 1:18 PM No comments:
မာမာအေး (၁၉၄၄ - )
မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၃ဝ၄ ခုနှစ် ဒုတိယ ဝါဆိုလတွင် မြောင်းမြမြို့ ရှမ်းကုန်းပိုင်း၌ ဖွားမြင်သည်။ ဖခင် နှဲဆရာ ဦးအေး၊ မိခင် ဒေါ်သန်းနှစ် (အဆိုတော် မြောင်းမြသန်း) တို့ ဖြစ်ပြီး အမည်ရင်း မအေးမြင့် ဖြစ်သည်။
အသက် ၃ နှစ်ကျော်မှ စ၍ "ခေတ်သစ် ရာဇဝင် ပြဇာတ်အဖွဲ့" တွင် သီချင်းဆို၊ ပြဇာတ် ကခဲ့သည်။ အသက် ၈ နှစ်တွင် စတင် အသံ လွှင့်ခဲ့သည်။ သန်းသန်းမြင့် အမည်ဖြင့် "စန္ဒရား မြမြအေး အပျော်တမ်း တူရိယာ အဖွဲ့"၊ မြင့်မြင့်အေး အမည် ဖြင့် "ပွင့်ဦး တေးသံ အပျော်တမ်း တူရိယာ အဖွဲ့"၊ "မြင့်သီရိ အပျော်ထမ်း တူရိယာ အဖွဲ့"၊ "ချိုတေးရှင် တူရိယာ အဖွဲ့"၊ မာမာအေး အမည်ဖြင့် "ရဲသီဟ အပျော်တမ်း တူရိယာ အဖွဲ့"၊ "စစ်ရဲ ဂီတ တူရိယာ အဖွဲ့"၊ "ကေသီပန် တူရိယာ အဖွဲ့"၊ "ဂီတ မာလာ သီချင်းကြီး တူရိယာ အဖွဲ့"၊ "စောင်း ဦးခင်မြင့် သီချင်းကြီး တူရိယာ အဖွဲ့"၊ "မန္ဈလေး စန္ဒရား ဦးအုန်းမောင် သီချင်းကြီး တူရိယာ အဖွဲ့" တို့တွင် ပါဝင် ဖျော်ဖြေ ခဲ့သည်။
၁၉၅၅ - "သက်တန့်ပေါ်မှာ ကစားမယ်" သီချင်းဖြင့် နိုင်ငံသိ အဆိုတော် ဖြစ်လာသည်။
၁၉၅၆၊ ၅၇၊ ၅၈ ကျောင်းပေါင်းစုံ ကဗျာရွတ် ပြိုင်ပွဲတွင် အလယ်တန်း ပထမဆု ၃ နှစ် ဆက်တိုက် ရရှိ၍ တံခွန်စိုက်ဆု နှင်းခြင်း ခံရသည်။
၁၉၅၇ - "လေးမာ" ကလောင် အမည်ဖြင့် ကဗျာစာညွန့်၊ သီချင်းများ ရေးခဲ့သည်။
၁၉၆၁ - ၆၄ ဒုတိယ မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ် လက်ထောက် ထုတ်လွှင့်ရေးမှူး။
၁၉၆၄ - ၆၅ မြန်မာနိုင်ငံ ခေတ်ပေါ် တေးဂီတ ကောင်စီ အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်။
၁၉၆၄ - ၇၇ မြန်မာ့အသံ လက်ထောက် ထုတ်လွှင့်ရေးမှူး (အလုပ်သမား ပညာပေး အစီအစဉ်)။
၁၉၆၈ - ၇ဝ မြန်မာနိုင်ငံ ဂီတ ကောင်စီ အမှုဆောင်နှင့် ဂီတ ပဒေသာ မဂ္ဂဇင်း ကော်မတီဝင်။
၁၉၆၉ - ၇၃ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် အဖြစ် "မြခြူသံ"၊ "သူ့ကိုမှ ချစ်သည်"၊ "မန်ဒါလီ" ရိုက်ကူး ခဲ့သည်။
၁၉၇၁ - "တေးသံရှင် ဓာတ်ပြား ထုတ်လုပ်ရေး" တည်ထောင် ခဲ့သည်။
၁၉၇၄ - "သိုးကလေး မေမေ" လုံးချင်း ဝတ္ထု ရေးသား ခဲ့သည်။
၁၉၇၆ - "အေး အဆို လေ့ကျင့်ရေး ကျောင်း" တည်ထောင်ခဲ့သည်။
၁၉၇၇ - "မာမာအေး တေးဂီတ လုပ်ငန်း" တည်ထောင်ခဲ့သည်။
၁၉၈၉ - အမျိုးသား ဂီတ ပညာရှင်များ အဖွဲ့ချုပ် အတွင်းရေးမှူး (၁)။
၁၉၉၅ - ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီး ဌာန မဟာဂီတ သီချင်းကြီးများ စိစစ်ရေးနှင့် ဂီတ သင်္ကေတ မှတ်တမ်းပြုရေး ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်၊ စည်းဝါးသံကျ စိစစ်ရေး အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး။
၁၉၉၅ - ၉၇ ဆိုကရေးတီး ပြိုင်ပွဲ၊ အဆိုအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး (မဟာဂီတ)။
၁၉၉၇ - Studio-A အသံသွင်းခန်း တည်ထောင် ခဲ့သည်။
၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ စ၍ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် ခေတ္တ နေထိုင်လျက် ဂီတ မှတ်တမ်းများ ရေးသား ပြုစုရင်း၊ ဆေးပညာ သင်တန်းများ တက်ရောက် သင်ကြားရင်း အမေရိကန် ပြည်နယ် များနှင့် အင်္ဂလန်၊သြစတြေးလျ၊ ဂျပန် နိုင်ငံများရောက် မြန်မာ့ ဂီတ ချစ်သူများကို သွားရောက် ဖျော်ဖြေ လည်ပတ်ရင်း လန်ဒန်မြို့ အခြေစိုက် ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်မှ တဆင့် သောတရှင် ပြည်သူများ အတွက် "ပြောပြစရာ တွေလည်း တပုံကြီး ရှိသေးတယ်" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရေးသား ပေးပို့ အသံလွှင့်လျက် ရှိသည်။
မိုးမခ Radio and Multimedia ၏ အကြံပေး ဖြစ်သည်။
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 5:49 PM No comments:
မောင်စွမ်းရည် ( ၁၉၃၇ - )
အမည်ရင်း - ဦးဝင်းဖေ၊
မိဘ - ဦးသိန်းဖေ (ရွာသူကြီး၊ မူလတန်း ကျောင်းအုပ်)၊ ဒေါ်တင်ကြည်၊
ဇာတိ - မြင်းခြံမြို့နယ်၊ ကန်ဆင့်တောင်ရွာ၊
မွေးချင်း - ၇ ဦး အနက် အကြီးဆုံး၊
မွေးနှစ် - ၁၉၃၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့၊
ပညာရေး - ဝိဇ္ဇာ၊ ပညာရေး ဒီပလိုမာ၊ စာကြည့်တိုက်ပညာ ဒီပလိုမာ၊
အလုပ် - ကျောင်းဆရာ၊ သမိုင်း - ပြည်သူ့ နီတိ - မြန်မာစာ သင်ရိုး အဖွဲ့ဝင်၊ မြန်မာစာသင်ရိုး လက်ထောက်၊ အခြေခံ ပညာ ဦးစီး ဌာန စာကြည့်တိုက်မှူး (ငြိမ်း)၊ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက် ပညာ ဌာန ပြင်ပ ကထိကနှင့် စာစစ်၊ ပညာ တန်ဆောင် ပညာရေး မဂ္ဂဇင်း အတိုင်ပင်ခံ အယ်ဒီတာ အဖွဲ့ဝင်၊
မြင်းခြံ အစိုးရ အထက်တန်းကျောင်း၊ မန္ဈလေး အထက (၁)၊ မန္ဈလေး တက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် ပညာရေး တက္ကသိုလ် များတွင် ပညာ သင်ကြားခဲ့ပြီး၊ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ ပညာရေး ဒီပလိုမာ၊ စာကြည့်တိုက် ဒီပလိုမာ ဘွဲ့များ ရရှိခဲ့သည်။
ဇနီး ဖြစ်သူမှာ ဒေါ်ခင်နွဲ့ကြည် ဖြစ်ပြီး၊ သားသမီး ၄ ဦး ထွန်းကားခဲ့သည်။
- ၁၉၅၃ ခုနှစ် - မန္ဈလေး အထက (၁) ကျောင်းသား သမဂ္ဂ စာစောင်တွင် ကဗျာ စတင်ရေး၊
- ၁၉၅၉ ခုနှစ် - မန္ဈလေး တက္ကသိုလ် နှစ်ပတ်လည် မဂ္ဂဇင်း ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး၊
- ၁၉၅၇ - ၅၉ - ကျောင်းသား သမဂ္ဂ အမှုဆောင်၊
- ၁၉၆၁ - ၆၂ - မန္ဈလေး တက္ကသိုလ် ကလောင်ရှင် အသင်း အတွင်းရေးမှူး။
- ၁၉၆၂ - ၂ဝဝ၂ (မြန်မာပြည်တွင်း)
အထက် မြန်မာ နိုင်ငံ စာရေး ဆရာ အသင်း အလုပ်အမှုဆောင် (တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး)၊ လူထု သတင်းစာ၊ ရှုမဝ၊ ငွေတာရီ၊ မိုးဝေ၊ စာပေဂျာနယ်၊ သောင်းပြောင်း ထွေလာ၊ မြားနတ်မောင်၊ ရွှေဝတ်မှုန်၊ မန္ဈလေး ဂျာနယ်၊ ဗြူတီ စသည့် စာနယ်ဇင်း များတွင် ကဗျာနှင့် စာပေ ဝေဖန်စာများ ရေးသား။ မြန်မာ့ ရိုးရာ လူထုတေး၊ ပေပုရပိုက် စုဆောင်း၊
- ၂ဝဝ၂ နှင့် နောက်ပိုင်း (မြန်မာပြည် ပြင်ပ)
၂ဝဝ၂ နိုဝင်ဘာ - နယ်သာလန် နိုင်ငံ အမ်စတာဒမ်မြို့ လေဒင် တက္ကသိုလ် အာရှ စာပေ နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲတွင် တက်ရောက် စာတမ်း ဖတ်ကြား။
(၁) အိုင်အိုဝါ တက္ကသိုလ် နိုင်ငံတကာ စာရေး ဆရာများ အစီအစဉ်သို့ ၃ လ တက်ရောက်၊
(၂) နီဘရာစတာမြို့ KHN အနုပညာ စခန်းဝင်၊
(၃) ဝါရှင်တန် တက္ကသိုလ် FBC နှစ်လည်ပွဲတွင် တက်ရောက် စာတမ်း ဖတ်ကြား၊
၂ဝဝ၄ - ၂ဝဝ၅ မြောက်အီလီနွိုက် တက္ကသိုလ် Center for Burma Studies တွင် သုတေသီ အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်၊
၂ဝဝ၅ - ဂျပန်နိုင်ငံ မိုးသောက်ကြယ် စာကြည့်တိုက် နာယက၊
၂ဝဝ၆ - (၁) DVB, RFA အသံလွှင့် ဌာနများ၏ အသံလွှင့် ဆောင်းပါးရှင် (ရွှေဒေါင်းတောင် ကဏ္ဍ)၊
၂ဝဝ၇ - (၁) VOA အသံလွှင့် ဌာန၏ သက်ကြီးစကား သက်ငယ်ကြား အစီအစဉ်၊
ယခု မိုးမခ Radio and Multimedia ၏ အကြံပေး၊ အခါအားလျော်စွာ ပြည်ပရောက် မြန်မာများ၏ စာအုပ် စာစောင် ထုတ်ဝေရေး လုပ်ငန်းများ အတွက် အတိုင်ပင်ခံ အယ်ဒီတာ။ ဂျပန် မေခ ရေဒီယို အဖွဲ့ အကြံပေး၊
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ စာအုပ်များ
(၁) စိတြကဗျာများ (ကြည်အောင်နှင့် တွဲဖက်ပြီး) (၁၉၆ဝ)
(၂) အနီနှင့် အပြာ ကဗျာများ (အမျိုးသား စာပေဆုရ) (၁၉၆၄)
(၃) ဟိုချီမင် အကျဉ်းထောင်က ပုလွေသံ (ဘာသာပြန် ကဗျာ) (၁၉၆၄)
(၄) ပြည်သူရှုဒေါင့် စာအုပ် ဝေဖန်ချက်များ (၁၉၆၆)
(၅) မန္တလေးမြို့ရဲ့ မနက်ခင်း ကဗျာများ (၁၉၇ဝ)
(၆) ဂယက် စာပေ ဆောင်ပါးများ (၁၉၇၃)
(၇) မြန်မာ စာပေ ဘာလဲ ဘယ်လဲ (၁၉၇၆)
(၈) အမေ့ခေါ်သံ ကဗျာများ (၁၉၈၇)
(၉) အတွေးကြွယ်ကြွယ်၊ အရေးလွယ်လွယ် အက်ဆေးငယ်များ (ဒေါ်နွဲ့ကြည်နှင့်) (၁၉၉၂)
(၁ဝ) စာပန်းချီ စာစီစာကုံးများ (၁၉၉၆)
(၁၁) ဖိုးဝနဲ့ ဖိုးလှ ကလေး ကဗျာများ (၁၉၉၉)
(၁၂) နံ့သာသူခိုးနှင့် ဝတ္ထုတိုများ (၂ဝဝဝ)
(၁၃) ကဗျာဆရာ့အဖေ ကဗျာဆရာ့အမေ (၂ဝဝ၂)
(၁၄) သူတို့နှင့် ကျနော် (၂ဝဝ၂)
(၁၅) ဘာလဲဟဲ့ မောင်စွမ်းရည် (၂ဝဝ၇)
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 5:40 PM No comments:
၁၉၅၄ ခု၊ ဇူလိုင် ၂၃ ရက်တွင် ညောင်လေးပင်မြို့တွင် အဖ တပ်ကြပ်ကြီး အေးမောင် (ငြိမ်း)၊ အမိ ဒေါ်ကြည်တို့ မွေးဖွားသည်။
၁၉၆ဝ - ၁၉၇၂ ပုသိမ်မြို့ ဘီဘီအမ်ကျောင်း (နောက် အထက - ၃) တွင် အခြေခံပညာ အထက်တန်းထိ သင်ယူခဲ့သည်။ ၁၉၇၃ - ၁၉၇၆ ပုသိမ်ကောလိပ်၊ ၁၉ဝဝ - ဝ၁ တက္ကသိုလ် စာပေးစာယူ သင်တန်း၊ ၁၉၈၂ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် မဟာဝိဇ္ဇာ နောက်ဆုံးတန်း (မြန်မာစာ) တက်ခဲ့သည်။
၁၉၈၂ တွင် မိုးဝေနှင့် ရူမဝ မဂ္ဂဇင်းများမှ တဆင့် စာပေလောကသို့ ဝင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ တွင် ဆရာ နတ်နွယ်နှင့် တွဲ၍ နွယ်နီ မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ၊ ၁၉၉၉ - ၂ဝဝဝ ရနံ့သစ်၊ မိုး၊ မုခတို့တွင် အယ်ဒီတာ အဖြစ် တာဝန် ယူခဲ့သည်။
၁၉၈၁ တွင် ဒေါ်ခင်ဆွေရီနှင့် အိမ်ထောင်ကျသည်။ လရောင်ဝေး၊ လပြည့်ဝေး၊ လမင်းဝေ သားသုံးယောက် ထွန်းကားခဲ့သည်။
၁၉၉၈ ခုတွင် ဖြူးမိတ်ဆွေများ စာကြည့်အသင်း ကဗျာဆု ရရှိသည်။
စာပေနှင့် နိုင်ငံရေး ယုံကြည်ချက်များ၊ လွတ်လပ်ခွင့်များအတွက် ၎င်း၏ လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် ၁၉၇၆ မှ ၁၉၇၉၊ ၁၉၈၈ နှင့် ၁၉၈၉-၉၁ နှစ်များတွင် အာဏာရှင်တို့က ထောင်သွင်း အကျဉ်းချခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
၂ဝဝ၇ ခုနှစ်၊ သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်များ ဦးဆောင်သည့် စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးမှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင် ထောက်ခံ အားပေးခဲ့သဖြင့် ထိုင်း - မြန်မာ နယ်စပ်သို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ခဲ့ရသည်။
ထို့နောက် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် ရရှိသဖြင့် ယခုအခါ အမေရိကားမှာ နေထိုင်နေရင်း ပြည်ပမှာ ထုတ်ဝေနေတဲ့ စာစောင်များနှင့် မြန်မာပိုင်း ရေဒီယို အသံလွှင့် အစီအစဉ်များတွင် စာပေရေးရာနှင့် နိုင်ငံရေးရာ ဆောင်းပါးများ ရေးသားလျက် ရှိသည်။
မိုးမခ စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့၏ ပင်တိုင် စာရေးဆရာတဦးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 5:31 PM No comments:
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 5:16 PM No comments:
From - SFSU, Office of Conference Services 800 Font Boulevard San Francisco, California 94132 Tel: (415) 338-3972 Fax: (415) 405-0393
Thank you for choosing to stay with us at San Francisco State University!
A reservation has been placed for you in our Hospitality Suites at University Park North.
Guest Name: Win Pe, Maung Swan Yi, Mar Mar Aye, Aung Way 􀂂 Arrival Day/Date: Friday, November 7, 2008 􀂂 Departure Day/Date: Monday, November 10, 2008 􀂂 Estimated Time of Arrival: 12:00 pm 􀂂 Number of Nights Reserved:3􀂂 rate: $ 90 per night 􀂂 Total: $ 270
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 7:07 PM No comments:
Hall Reserved by Burmese American Democratic Alliance (BADA)
Location: Los Cerritos Community Center, 3377 Alder Ave, Fremont, CA
Date: Nov 8, Saturday per EC phone meeting
Time: 4:00 to 10:00 p.m
Fee:$ 785.00 ($ 510.00 for6hours + security deposit $275)
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 7:00 PM No comments:
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 6:54 PM No comments:
9th Anniversary of Burmese Literary Talk hosted by Burmese Community at SF Bay Area
MoeMaKa 2008 Retreat - Limitted Invitation Letter to respected guests
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 11:27 AM No comments: